Firefox 16 waa hawlgab iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaato xagga amniga ah | Laga soo bilaabo Linux
Dhawr maalmood ka hor ayaa version Firefox 16, maantana waxaan ku ogaadaa Genbeta in laga noqday Mozilla FTP dhibaato khatar ah oo xagga amniga ah.
Sida ay noogu sheegayaan gudaha GenbetaSida muuqata, u nuglaantaani waxay u oggolaatay weeraryahan, iyada oo loo marayo degel xun, inuu marin u helo taariikhda URL-yada uu booqday isticmaale, sidaas awgeedna la arki karo labada bog ee aan ku aragnay biraawsarkayaga iyo cabbirada qaarkood ee aan hore u samayn jirnay.
Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in la sameeyo a hoos u dhig ilaa nooca 15.0.1 oo hadda ah kan ugu dambeeya ee xasilloon.
Gaar ahaan waxaa jira wax aanan fahmin. Haddii nooca 16 uu leeyahay dhibaatadan, miyay noocyada Aurora iyo Nightly ee kanaallada sidoo kale iyaga la socdaan? Gaar ahaan, waxaan isticmaalayaa nooca 16 waxaanan hubaa inaan dhowaan lahaan doono cusbooneysiin khaladkan saxaysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Firefox 16 hawlgab ayay u tahay dhibaato xagga nabadgelyada ah
Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta aysan ugu gudbin imtixaanka Arch?
Dhab ahaan waan saameyn ku yeeshay maxaa yeelay wali qaanso uma aheyn, waxaan kaliya ku cusbooneysiiyay debiankeyga
Whoosh afka oo dhan oo ku saabsan xasilloonida Debian !! : /
Goorma ayuu Firefox 16 soo galay Debian oo aanan ka warqabin?
iyada oo aqristayaasha badankood isticmaalaya debian laga yaabee inay u maleeyeen in Firefox uu kujiro keydadka debian, qalad la fahmi karo, miyaadan u malayn?
Iyo maalin kadib hagaajinta, waxaa hadda laga heli karaa Arch repo deggan.
Deg deg badan.
Waqti aan ku jirno ayaan ka soo gudubnay nooca 3.6 illaa 16.
Inaad waxbadan socodsiiso oo aad waxyar kabarto.
Horey ayey usocdaan iyagoo kujira dariiq gaar ah oo "kahooseeya" kuwa kale waxayna halkaan ka fiirsadaan musiibooyinka, had iyo jeer waxay wataan noocyo cusub oo dhag jalaq uma siinayaan sida xasiloonida ay tahay, si deg deg ah, taasi waxay aheyd waxa kaliya ee aanan waligey jeclaan ee Firefox!
Waa maxay marnaba? Hadday tahay wax aysan waligood qaban. Hadday tallaabo tallaabo u socdeen, dadku way cawdeen (sidii ay ahayd ilaa 3.6 - 4) haddana waxay ka cabanayaan inay si dhakhso leh u socoto.
Nasiib wanaag ma lihi nooca 'versionitis xD'
Wanaagsan Cusboonaysiinta ayaa soo baxday
Mm, laakiin wali kamay digin goobta rasmiga ah .. yaab leh 😀
Cusbooneysiin (Oct 11, 2012)
Cusbooneysiin ku saabsan Firefox ee Windows, Mac iyo Linux ayaa la sii daayay 12-ka duhurnimo PT bisha Oktoobar 11. Isticmaalayaasha si toos ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa oo waxaa lagala soo bixi doonaa cusub http://www.mozilla.org/firefox/new/ heli doonaa nooca cusub.
Dib u habeyn loogu talagalay nooca Android ee Firefox ayaa la sii daayay 9pm PT 10 Oktoobar.
Nooca 16.0.1 hadda waa la heli karaa, horeyba waxaa looga heli karaa bakhaarrada iyo bogga rasmiga ah.
Ku jawaab Ph0eNix
Hagaag, waa wax layaab leh archlinux-kayga, xitaa igama wargaliyo inaan cusbooneysiiyo 16 haha, maxay noqon doontaa?
Oo ma waxaa jira waddo loo maro, tusaale ahaan ... la sii joogo nooca 10ESR?
Maaddaama Ubuntu leedahay PPAs sii deynta xasilloon iyo betas, waxaad u badan tahay inaad mid u leedahay kanaalka muddada-dheer ee ay shirkaduhu isticmaalaan oo aysan ahayn inay gacanta ka tirtiraan oo ay ku rakibaan. Debian, ESR iyo kuwa caadiga labadaba waxay kujiraan bakhaarrada iyo dib-u-dhigashada, kaliya xusuusnow inaad heli doontid oo keliya casriyeynta amniga ee muhiimka ah laakiin aan loo baahnayn kuwa astaamaha cusub iyo in Noofembar Firefox 17 la sii deyn doono, taas oo sidoo kale ah ESR oo markaa labada noocba ay isla hal u wada geli doonaan lambar (waad cusbooneysiin laheyd mar kale nooca deggan ee aad tahay) laakiin waxay kaa caawin laheyd inaad ka ilaaliso 17 illaa 24.
Waa inuu jiraa dib-u-helid, ugu yaraan furitaanka 'SUS' ee mozilla repo waxaad ku leedahay ikhtiyaarka FireFox ESR kaas oo habka 17 uu u noqon doono ESR-ka soo socda.
Mageia waxay haysaa FireFox ESR oo ah nooca ugu habboon.
Waa maxay hoos u dhac, waana ku faraxsanahay inaan cusbooneysiiyo.
Isticmaalka ugu fiican KONQUEROR 🙂 🙂
Ernesto ubax dijo
Maalintii shalay ahayd ayaan cusboonaysiinta ka soo dejistay Firefox 16, kadib markii aan dib u bilawday biraawsarkaygii oo si kasta oo aan isugu dayo inaan u galo internetka, ma awoodin inaan helo, ka dib waxaan isku dayay inaan daalaco Epyphany ka dib markii aan helay sidoo kale way dhacday.
Hadda waxaan adeegsadaa Ubuntu 12.04 Unity. Waxaan isku dayi doonaa inaan arko haddii maanta iyada oo loo marayo nidaamka cusbooneysiinta Ubuntu dhibaatada Firefox horeyba loo saxay
Jawaab Ernesto Flores
Tani waa maalintii seddexaad ee aan isku dayo inaan ku xalliyo dhibaatadeyda Thunderbird 16.0.1 iyo dejinta goobaha adeegga boostada, oo aan waxtar lahayn. Waxaan isticmaalaa Ubuntu 12.04.
Waxaan cadeeyay inaan heli karo laakiin aanan dirin.
Suuragal maaha in caawimaad laga helo server-kayga oo ah Speedy.com.ar maxaa yeelay waxay dhahaan taageero uma hayaan noocan Thunderbird.
Fadlan, miyaan u baahanahay inaan muujiyo, haddii ay suurogal tahay, sidaan ugu hagaajin lahaa koontadayda mail-ka baxaya.
Xilligan iyo sida aan had iyo jeer u haysto waa: mail.speedy.com.ar loogu talagalay SMTP.
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, fadlan i weydii.
Mar dambe ma garanayo meel aan u noqdo. Waxaan warqad u qoray Hispanic Mozilla iyo meelo kale oo webka ah oo ka hadlaya Thunderbird, laakiin waxba ma noqon.
Laga soo bilaabo mar hore aad ayaad u mahadsan tahay.
Ku jawaab veronicab
Oo hadaad dhigto smtp.speedy.com.ar?
Waxa dhacaya waa inay tahay mail.speedy.com.ar ay iyagu xaqiijiyeen.
Si kastaba ha noqotee waan tijaabin doonaa soo jeedintaada waana soo sheegi doonaa.
Mar labaad waad salaaman tahay,
Ma jiraan wax la sameeyo.
Waxaan isku dayayaa inaan mar kale la xiriiro serverka.
Ilaa hadda waan kari waayey.
Haddii aan xalliyo, ogow.
Labadaba waxaan isku dayay boostada…. sida smtp with. waxayna umuuqataa inay shaqeynayso, taasi waa, waxay jirtaa sidaan oo kale. Su’aashaydu waxay tahay, waa maxay dhibaatada gaar ahaan? oo maxaan tan ku leenahay?
Si kale haddii loo dhigo, ma kala soo bixi kartaa ama ku arki kartaa boostadaada IMAP ama POP3 dhibaato la'aan? Kaliya dhibaato ayaa kaa haysata dirista emayllada (SMTP)?
Tan tan iyo goorma ayaa ku siinaysa dhibaatooyin.
Waan soo dejisan karaa emayllada dhib la'aan laakiin ma diri karo.
Waxaan isku dayay smtp ama mail.speedy.com.ar oo ah waxa u dhigma, tan iyo shalay waxaan la xiriiray Speedy (ugu dambeynti) wayna xaqiijiyeen cinwaankaas.
Tani waxay igu dhacdaa aniga oo kaliya Thunderbird ee Ubuntu, maaddaama Windows-ka aysan jirin wax dhibaato ah, taas oo ah sababta ay u tahay inay dhibaato ku noqoto nooca Th.
Waan sharixi doonaa hawsha xoogaa.
Dhibaatooyin badan ayaan kala kulmay faylasha madaama aan si joogto ah u tuurayay qaladaad iyo bilaw kasta ama dib ubilaabasho waxaan ku tijaabin lahaa saxarada khaladaadka. Ka dib waxaan ka fikiray inaan dib u rakibo Ubuntu 12.04 laakiin iima ogolaanin inaan dib u helo xogteyda emailka. Waxa kaliya ee aan sameyn karay waxay ahayd in aan calaamadeysto calaamadeysyadeyda CD. Xaqiiqdii mar hore ayaan soo kabsaday waxayna kujiraan Firefox.
Waxaan dib u cusbooneysiiyay ka dib, anigoo ka taxaddaraya inaan calaamadeeyo sanduuqa qaabeynta / guriga, in kasta oo ay aniga isla qaabaysay. Sidaa darteed wax walba oo gurigayga ka mid ah waan waayey.
Thanks to caawinta Ubuntu-Guide iyo isticmaalka Photorec, waxaan soo ceshtay fayl fara badan, laakiin wali ma aqaano sida wax walba loogu dhejiyo meeshiisa.
Waxaan ku furay qaar ka mid ah kordhinta .txt waxaana muuqata inay jiraan emayl sidoo kale.
Dhibaatada ayaa markaa bilaabatay markii aan xisaabteyda mar kale furtay mana garan karo meesha qaladku ka jiro.
Waxaan sugayaa faallooyinkaaga.
Eeg, waxa ugu dhakhsaha badan ee aan ka fikiri karo ayaa ah inaad hubiso goobaha SMTP ee Windows, iyo goobaha SMTP ee Linux. Taasi waa, server-ka baxa (SMTP) ee Thunderbird ee Windows (oo ah halka ay si fiican kuugu shaqeyneyso) waa inaad heysataa dekedda isku xirka (malaha dekedda 25), iyo sidoo kale waa inaad haysataa xoogaa qaabeynta amniga, oo ku saabsan lambarka sirta, ama wax la mid ah.
Fikradda ayaa ah inaad isbarbar dhigto sanduuqyadaas, kuwa loo qaabeeyo Thunderbird ee Windows iyo Thunderbird ee Ubuntu 😉
Oo markaa waan arki doonaa haddii ay jiraan wax ka duwan.
Ma fahantay mise wax badan baan adkeeyay? 😀
Muddo dheer ma aanan isticmaalin Ubuntu, laakiin uma baahnid inaad qaab / guri u sameyso haddii aadan calaamadin sanduuqaas markaad rakibayso
Salaan iyo nasiib wacan 😉
Markale waad salaaman tihiin 🙂
Waxaan haddaba ku waalanayaa tan 🙁
Windows-ka kuma haysto Th, waxaan leeyahay Muuqaalka Muuqaalka ee Express oo kaliya waan arkay setinka.
Ficil ahaan waa isku mid tan aan ku haysto Th. Ficil ahaan waxaan u iri maxaa yeelay way xoogaa yar yahiin laakiin asal ahaan: fariimaha soo galaya pop.speedy.com.ar iyo waraaqaha socdaalka ah: mail.speedy.com.ar. No password adag.
Dabcan, waxay dhahdaa adeegeygu wuxuu ubaahanyahay xaqiijin (isticmaal lamid ah warqadaha imanaya) Ma garanayo waxa ay tahay maxaa yeelay ma muuqato.
Dekeddaha, waa isku mid: 25 iyo 110.
Waan ku celinayaa, waxaan u maleynayaa inay dhibaato ku tahay noocyadan Th.
Waxaan weydiinayaa: haddii aan hoos ugu dhigo nooc hore, miyaan waayi doonaa emayllada mar kale?
Waad ku mahadsantahay dhibaatadaada.
Halka ay ku qoran tahay in loo baahan yahay xaqiijin, ha ka welwelin ... waxay isticmaali doontaa lambarka sirta ah ee aad dirtay markii aad samaynaysay POP 😉
Hubso inaad si sax ah ugu haysatid Thunderbird ... iyo tan iyo markii aan nahay, waxa ugu muhiimsan oo aanan wali ku weydiinin weli LOL !!, waa maxay khaaska ah khaladka ay Thunderbird ku tusayso?
Sameynta hoos u dhigid nop ah ma tirtiri doonto wax emayl ah, laakiin marka hore aan isku dayno inaan ku xallino dhibaatada noocyadan 'Thunderbird' oo haddii aan guuleysan, waan hoos u dhigi doonnaa.
Haye (inyar wax ka bedel) haha
Waxa uu iigu jawaabayaa waa tan:
Diritaanka farriinta waa lagu guuldareystay.
Fadlan xaqiiji in dejimaha kootadaada Mail & Newsgroups ay sax yihiin iskuna day markale.
sup (toobiye maxaa ku yaal) hahaha
mmm ma u baahan tahay inaad ku habeyso wakiil ama wax la mid ah Thunderbird-kaaga? taasi waa, fikradihii ayaa iga sii yaraanaya, kumana hor jiro PC-gaaga sidaa darteed waddo maleh, gacmaheyga ayaan ku xiranahay haha.
Aan isku dayno inaan hoos u dhigno 🙂
Ka tirtir Thunderbird-ka, oo fiiri / var / cache / apt / archives / haddii aadan haysan .deb nuqulkii hore, haddii ay halkaas joogto laba jeer-guji oo waa intaas, saaxirka rakibidda waa inuu kuu furnaadaa 🙂
Haddii aadan heli karin faylka, ii soo sheeg inaan ka raadiyo internetka aniga lafteyda. By the way, noocee ah Thunderbird nooca aad hadda haysato, iyo midkee ayaad dooneysaa inaad rakibato?
Hm sida cajiibka ah ee suugaantaas, ay iigu egtahay maraq aniga haha
Hagaag, ka jawaabida su'aashaada:
Ma isticmaalo wakiil.
Ma haysto noocii hore ee / var / cache / apt / archives / 15.
Waxaan hadda haystaa 16.0.1
Waxaan ku weydiinayaa: haddii aan tirtiro Thunderbird, Firefox weli lama taabto, sax?
Sababtoo ah waxa kaliya ee aan u baahanahay ayaa ah in Firefox sidoo kale laga fogeeyo.
hahahahaha haa, 'sup' waa sida soo gaabinta 'adiga' oo kaliya 'u' iyo xitaa inbadan ... xaafada mmm, ama wax lamid ah LOL!.
Haddii aad ka saarto Thunderbird waxba kuma dhacaan Firefox, waa laba barnaamij oo kala duwan different
Ku saabsan Thunderbird 15 gudaha .DEB wali waan raadinayaa 🙁 🙁
Dhanka kale soo dejiso midkan aan hoosta kaga tagayo, furi, oo laba-guji halka lagu fulin karo ee Thunderbird:
Si kastaba ha noqotee, waxaan sii raadinayaa 15 gudaha .DEB, waa in Ubuntu repos uu jiro Thunderbird 11, ka dibna wuxuu aadayaa 16 ...
Jelou, akhri Hello, haha
Hal su'aal: emayllada aan hadda ku haysto nuqulkan, waxba ma dhacaan mise waa inaan dhoofiyaa?
Waan ka xumahay dib u dhaca, internet-kayga ima caawiyo haha.
Waa tan Thunderbird 15 gudaha .DEB: http://ftp.desdelinux.net/thunderbird_15.0+build1-0ubuntu0.12.04.1_i386.deb
Oo waa maya, waa inaadan dhibaato ku qabin emayllada 🙂
Sikastaba, nabada maskaxdaada, hadaad rabto, waad dhoofin kartaa 😀
Aad baad u mahadsan tahay KZ,
Waxaan uun galiyay waraaqahayga Ubuntuone.
Waxaan xasuustay inaan waxyaabo qaar soo raray oo waxaan is arkay aniga oo layaaban (raaxo) yaab leh oo aan soo geliyay feylal aan ka qoomameeyay luminta 🙂
Waan ku qanacsanahay kaalmadaada waxaanan kuu sheegi doonaa wixii ku dhacay hoos u dhaca.
dib baan is arki doonaa 🙂
Nooca aad igu heshay waa BETA.
Waan arki doonaa haddii aan heli karo nuqulkii ugu dambeeyay.
Waan kaaga digayaa
Ha ka welwelin taas, waa Beta laakiin waxay u shaqeysaa sida xasilloon wax kasta 😉
Weli waad isku dayi kartaa tii hore (.tar.bz2), furi, furi kartaa fuliyaha (Thunderbird) waana inuu furnaadaa dhibaato la'aan, dhammaan e-mayladaada iyo wax walba.
Waxaan halkaan u nimid inaan kaa caawino walwal ha worry
Mid wanaagsan oo ka mid ah dhibaatooyin badan.
Waxaan ugu dambeyntii ogaaday, Google iyada oo loo marayo, habka loo hagaajiyo boostada barakeysan.
Xalka? Tirtir koontada.
Marka waxaan marki ugu horeysay rakibay nooca 16.0, ma ahan 0.1 oo dhibaato igu keentay ka dibna waan tirtiray koontada waxaanan u ogolaanayaa Th inuu si toos ah u qaabeeyo mid cusub Hadda waan heli karaa oo diri karaa dhibaato la'aan 😀
Isaga oo ka hadlaya furida. Waan soo dejistay nooca tar.bz2 markaan googling galeyna waxaan ogaadey in si loo yareeyo ay lagama maarmaan tahay in la dhigo amarka: tar xjvf (file) .tar.bz2, laakiin amarka waa la diiday dhowr jeer. Wuxuu ka hadlay wax cunugga ku saabsan iyo in aysan jirin fayl ama tusayaal.
Fadlan ma cadeyn kartaa sida ay tahay howsha kala-bixinta
Mahadsanid iyo salaan 🙂
Runtii weligey ma jecli inaad tirtirto xisaabaadka oo aan markale abuuro, waxay la mid tahay qirashada in barnaamijku igu garaacay HAHAHA
Si aad u kala furfurto, waa wax fudud sida xaq-u-riixista feylka, waana inaad aragtaa ikhtiyaarka aad ku kala bixin karto meeshaas 😀
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad barato sida loo sameeyo amarrada, akhri boostadan: https://blog.desdelinux.net/con-el-terminal-comprimir-descomprimir-archivos/
Hagaag hadaanan tirtirin koontada waligey ma shaqeyn laheyn maxaa yeelay SMTP lama aqoonsan. Xaaladdan oo kale waxaan ka dhigayaa barnaamijka foorida Catalan. Muhiimadu waxay tahay hada way shaqeysaa 🙂
Haa, waxaan doonayay inaan ku sameeyo amar ahaan, markaa waad ku mahadsantahay iskuxirka.
haha ok, muhiimadu waa inaad xalisay dhibaatada 😀
Raali iga ahaada aakhirka waqtigaaga lumiyay oo aanan ku caawin not
PS: hahaha hambalyo qalbiga ka timid, hambalyo inaad rabto inaad amarka wax ku qabato, taasi waa tayo ay yaryihiin few
Ha dhihin maad i caawin. Kaliya adoo iiga jawaabaya oo aad fikrado igu tuuraya, horayba waad u fulisay.
Wax badan ha ii hanbalyeynin maxaa yeelay qoto dheer waxaan ka baqayaa amarrada barakaysan laakiin indhahayga ma xidhi karo gebi ahaanba waxaanan u malaynayaa inaanan weligood isticmaali doonin
Waad ku mahadsantahay iskuxirka amarrada.
Waxay ahaan doontaa waqti kasta oo lagugu dhibto su'aal 🙂
Hagaag waan ku qanacsanahay markaa 😀
Nah ha ka baqin amarrada, i rumee inay iyagu yihiin saaxiibkaaga ugu fiican, maxaa yeelay waxay si sax ah u sameeyaan waxaad ku amarto inay sameeyaan haha, halkan waxaa ku yaal qoraalo kaa caawin kara
Uma baahnid inaad fahamto amarrada oo dhan, laakiin aniga aamin, waxay kuu noqon doonaan baashaal fara badan 😀
Ha ka baqin terminaalka, ma dhaawaceyso 😉
Salaan kadib waadna ogtahay, hadaad ubaahantahay wax kale ... halkaan degelkan waxaan jecel nahay inaan ku caawino 🙂
Mahadsanid KZ 😀
Ilaa daqiiqad kasta.
hadda waxaan nahay 17.
Muxuu GNU / Linux u baahan yahay si uu ugu dambeyn u gaaro isticmaalaha ugu dambeeya?